हाइटेन्सनमुनि घर-जग्गा किनाएर दलालले फसाउँछन्, सोझा हेरेको हेर्यै - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
हाइटेन्सनमुनि घर-जग्गा किनाएर दलालले फसाउँछन्, सोझा हेरेको हेर्यै
बैशाख ०३, २०७५ 1258 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्र हाइटेन्सन लाइनमुनि अवैधरूपमा घर निर्माण गर्ने क्रम बढेको छ ।
प्राधिकरणले प्रसारण लाइन विस्तारक्रममा जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा दिए पनि नियम उल्लंघन गरेर घर बनाउने काम रोकिएको छैन । स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका, मालपोत तथा जग्गा दलालको प्रलोभनमा जोखिमको ख्यालै नगरी उच्च क्षमताको नांगो तारमुनि घर निर्माण गर्नेको होड नै चलेको छ ।
काठमाडौं गोकर्णेश्वर, शंखरापुरलगायत नगरपालिकाभित्र अवैधरूपमा हाइटेन्सन लाइनमुनि घर निर्माण गर्नेको संख्या बढिरहेको छ । यसो हुँदा घरधनीको दैनिक जोखिमपूर्ण हुन्छ र परिश्रम गरेर जोडेको सम्पत्तिको रक्षा पनि हुँदैन ।
बस्ती विकाससँगै गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८ माकलबारीमा हाइ भाेल्टेज तथा १३२ केभी लाइनमुनि ७५ भन्दा बढी घर निर्माण गरिएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा यो क्षेत्रमा नियमविपरित घर निर्माण गर्ने र सरकारी नियम मिच्न सघाउने दलालको बिगबिगी छ ।
नगरपालिकाका कर्मचारीको मिलेमतो र जग्गा दलालको चलखेलमा स्थानीय तथा उपत्यका बाहिरका व्यक्तिलाई फसाइएको छ । जोरपाटी पुलदेखि गोकर्णसम्म मात्र सयौं पक्की घर निर्माण गरिएको छ ।
माकलबारीकी स्थानीय कृष्णमाया राईले घर किनेको तीन बर्ष भयो । उनको घर हाइटेन्सन लाइनमुनि छ । प्रसारण लाइनको तारले छुने गरी साढे दुई तलाको घर निर्माण गरिएको स्थानीय बताउँछन् ।
माकलबारीमा घर किनेर बसेका राई परिवारले एक करोडमा घर किनेको र उच्च भोल्टेजको तारमुनिको असरबारे जानकारी नभएको बताए । ‘सस्तो पाइयो भनेर बुझ्दै नबुझी घर किनियो, अहिले हाइटेन्सन लाइनमुनिको घरले निकै तनाब दिएको छ,’ रार्इले भनिन् । यो क्षेत्रमा हाइटेन्सनमुनि घर हुने अधिकांश काठमाडौं बाहिरका बासिन्दा छन् ।
सस्तोमा पाइएको भन्दै हाइटेन्सन लाइनमुनि घर–जग्गा किन्नेहरू अहिले जग्गा दलालले फसाएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । भोजपुर घर भई हाल माकलबारी हाइटेन्सनमुनि घर किनेका पदम राईले आफू ठगिएको बताए ।
‘मालपोतको रसिद पनि छ, त्यतिबेला मोलपोतका कर्मचारीले पनि हुन्छ भने अहिले ती कर्मचारी कहाँ छन ? थाहा छैन,’ राईले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘मैले किनेको घरको त यसअघि नै घरधनीले मुअब्जा लिइसकेको रहेछ ।’
७५ घरको लालपुर्जा नै छैन : मेयर चालिसे
माकलबारी क्षेत्रमा अवधै घर बन्न थालेपछि गोकर्णेश्वर नगरपालिको टाउको दुखेको छ । अवैधरूपमा बन्दै गरेका घर रोक्न नसक्दा अहिले अर्को समस्या थपिएको छ ।
झन्डै २० वर्षसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिबिहीन हुँदा त्यसको फाइदा सयौं जग्गा दलालले उठाए । दलालले सस्तोको प्रलोभनमा उपत्यका बाहिरका सोझा व्यक्तिलाई फसाएको पुष्टि भएको छ ।
माकलबारी क्षेत्रमा मात्र ७५ भन्दा बढी घर नियम मिचेर निर्माण गरिएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसेले बताए । ‘हाइटेन्सन लाइनमुनि बनेका हरेक घरको लालपुर्जा समेत छैन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’
हाइटेन्सनमुनि पर्ने जग्गा तथा घरको यसअघि नै प्राधिकरणले मुअाब्जा दिइसकेको हुँदा दोहोर्याएर दिन सक्दैन । र, नियम पनि छैन । मुआब्जा दिइसकेको जग्गाको स्वामित्व प्राधिकरणकै हुन्छ । उसले जुनसुकै बेला भत्काउन सक्छ वा जग्गा नियन्त्रणमा लिन सक्छ । तारमुनि निर्माण भएका अधिकांश घरको नक्सा पाससमेत नगरेको चालिसेले बताए ।
घरमाथि हाइटेन्सन लाइन, हरेक दिन मृत्युकाे जाेखिम (फाेटाे फिचर)